your browser – Zulu Translation – Keybot Dictionary
Keybot 49 Results 10 Domains
Ungakwazi futhi ukusetha isiphequluli sakho ukuthi sivimbele wonke amakhukhi, okufaka phakathi amakhukhi ahlobene namasevisi wethu, noma ukubonisa lapho ikhukhi isethwe yithi. Yize kunjalo, kubalulekile ukukhumbula ukuthi iningi lezinhlelo zethu kungenzeka zingasebenzi kahle uma amakhukhi wakho akhutshaziwe. Izibonelo, kungenzeka singalukhumbuli ulimu oluncamelayo.
Ungakwazi futhi ukuthi uhlele isiphequluli sakho ukuthi sivimbe wonke ama-coockies, okubandakanya ama-coockies ahlobene nezinhlelo zethu, noma ukuveza uma i-cookie isethwa ithina. Yize kunjalo, kubalulekile ukukhumbula ukuthi iningi lezinhlelo zethu kungenzeka zingasebenzi kahle uma-cookies enziwe ukuthi angasebenzi. Izibonelo, kungenzeka singalukhumbuli ulimu oluncamelayo.